ISTICMAALKA CHIVES (SKORODA BASASHA, CHIVES BASAL): WANAAGSAN IYO WAXYEELO - BOW
Chives, ama chives, caan ah oo loo yaqaana sida skoroda - raadin dhab ah ee ninkii beerta ka shaqaynayay. Waa mid aad u faa'iido badan, oo leh tiro badan oo ka mid ah guryaha dawooyinka, qurxinta goobta inta lagu jiro ubax, scares cayayaanka badan beeraha iyo beerta dhirta. Maqaalkani waxaad ku baran doontaa tayada waxtarka ee chives iyo nooca nooca ay tahay.
Chives: Calories, Vitamins iyo Minerals
Ugu horreyn, aan eegno waxa lafiirta u eg. Waxay ka tirsan tahay dhirta cawska. Xididdadiisa waa caddaan, dhuuban, dhar cad. Nalalka waa yar yihiin, oval-qaabeeya, daboolay buunshaha brown. Caleenta cagaaran ee dhalaalaya ee qaabka dhuumaha ayaa bixiya dabo madow. Dhexdhexaad ama dhammaadka Maajo, blooms basasha leh qurux qurux leh ama buro casaan leh kuwaas oo u egyihiin muraayado cufan. Skoroda ubax ah oo qurux badan oo qurux badan ayaa qurxiya goobta ilaa 20 maalmood. Seeds waa madow, qaab muuqaal ah, u bislaadaan sanduuqyada. Naadirku wuxuu abuuraa duurka cufan, illaa 0.5 m sare, tani waa geedka hore, caleemadiisuna waxay ka soo baxaan ciidda guga hore, marka barafku bilaabo inuu dhalo. Caleemaha yaryar waa midabka cagaaran, midab leh, casiir leh. By xagaaga, inta lagu guda jiro ubax, waxay noqdaan kuwo adadag iyo xamaasad.
Waa muhiim! Cun kaliya caleemaha khatarta ah ee cuntada. Waa in la yareeyo dhallinyarada. Marka dhirta blooms, caleemaha ma aha oo kaliya noqdaan kuwo adag, dhadhan, laakiin sidoo kale waay dhammaan guryaha faa'iido leh.
Tani waa badeecad cunto, maxaa yeelay waxaa jira 30 kiiloomitir halkii 100 g oo caleemo ah.
100 g oo jajab ah ayaa ka kooban:
90.65 g oo biyo ah;
3.27 g oo ah borotiinada;
2.5 g oo fiber ah;
1.85 g oo ah carbohydrates;
1 g oo ah ash;
0,73 g of carbohydrates.
Chives waxay ka kooban tahay fitamiin hodan ah, oo ay ku jiraan fitamiinada kooxahan:
Intaa waxaa dheer, waxaa ku jira qadar aad u muhiim ah oo wax ku ool ah micro iyo macro:
Baskani waa hogaamiyaha qoyskiisa marka la eego waxyaabaha la yiraahdo fitamiinada A, C iyo B. Waxa kale oo uu bixiyaa asiidh xasaasiyadeed oo muhiim u ah jirkeena (lysin, methionine, tryptophan) waxana ku jira faytoomiya badan oo la dagaallama cudurrada faafa.
Qalabka faa'iidada leh ee chives
Sababtoo ah waxyaabaha hodanka ah ee fitamiinada iyo macdanta qiimaha leh, chives waxay leeyihiin waxyaabo badan oo faa'iido leh.
Kuwa ugu caansan waa kuwa soo socda:
jilciya jirka oo leh fitamiino;
taageeraya garashada muuqaalka;
wuxuu hagaajiyaa rabitaanka cuntada;
daaweyn waxtarka leh ee dirxiga;
waxay ka hortagtaa horumarinta xanuunka atherosclerosis;
ciribtirka dhiigga iyo cirridka;
waxay ka hortagtaa hargabka ama waxay caawisaa inay la dagaalanto;
waxay ka caawisaa in laga takhaluso cudurrada faafa.
Chives waxay faa'iido badan u leedahay jidhka, iyada oo la jimicsiga fitamiinada ka dib xilliga jiilaalka, marka ay jirto ficil ahaan aan fiicnayn dabiiciga cusub ee miraha. Xasaasiyad adag - ballanqaad la'aan maqnaanshaha cudurrada faafa iyo cudurrada faafa, kuwaas oo aad ugu badan guga hore. Basasha waxay ka kooban tahay folic acid, taasoo lagama maarmaan u tahay hooyooyinka uurka leh, gaar ahaan xilliga hore ee uurka. Waxay kaalin muhiim ah ka cayaareysaa sameynta uurjiif caafimaad leh. Sababtoo ah heerka sare ee beta-carotene, xawaaruhu wuxuu caawiyaa sii wadista garashada muuqaalka. Astaamaha asaasiga ah ee amino, gaar ahaan liin, ayaa lagama maarmaan u ah ciyaartoyda si ay u dhisaan murqo. Intaa waxaa dheer, dhirta ayaa iska leh aphrodisiacs iftiiminaya dhaqdhaqaaqa galmada.
Ma taqaanaa? Basasha waxay dhaafaysaa qadarka fitamiinada iyo faa'iidooyinka ma aha oo kaliya jirka aadanaha. Tani waa warshad qulqulaya oo weyn, marka laga reebo, waxay ka careysiisaa dhirta sida aphids, kuwa lamid ah iyo shilinta geedaha ku dhow.
Isticmaalka chives ee daawada dabiiciga ah
Daawada dadweynaha, isticmaal caleemo cusub, cadaadis iyo infusions of skoroda. Si loo xoojiyo nidaamka difaaca iyo ka hortagga hargabka waxaa faa'iido leh in la cuno caleemo cusub oo dhirta maalin walba.
Daawo dhaqameedku waxay bixisaa talooyinka soo socda ee isticmaalka basasha ee cudurro kala duwan:
laga bilaabo gooryaanka - inta lagu jiro toddobaadka, cun 20 g caleemo basasha cusub;
for qufac - si yaryar u jar caleemaha iyo ku shub 2 qaado oo malab ah fiidkii, tuujin juuska ka baxay isku dar ah subaxdii iyo isticmaal shaaha maalin kasta;
caloosha - cab cabitaan ah cabitaanka basasha;
haddii ay dhacdo hypertension, qaso basasha jarjaran 1: 1 malab oo ku dabool hal qaado oo labadii jeer maalintii;
laga bilaabo dhiiglaha - hal mar maalintii muddo bil ah, cab 15 gram oo cabitaanka basasha ka hor cuntada;
si loo xoojiyo timaha xididada, waxaa lagu talinayaa in la xoqo casiirka basasha;
in dagaalka ka dhanka ah qashin - 30 g oo ah diirka basasha ku shub laba koob oo biyo karkaraya iyo kariyo 20 daqiiqo, biyo raaci timaha ka dib marka aad ku dhaqdo maraq diyaarsan;
si aad uga takhalustid finanku, tirtir wejiga suufka suufka lagu dhex daro casiirka basasha;
si loola dagaallamo maqaarka maqaarka, waxaad jarjartaa basasha jarjar gogol oo ku daboolan meelaha ay dhibaatadu saameysey 20 daqiiqo;
qabow ama cuno xanuun, waxa ay caawineysaa in la neefsado laba jeer oo casiir ah basbaaseed 3 daqiiqo.
Waa muhiim! [i] Waxaa lagama maarmaan ah in la cuno chives ugu dambeyn 15 daqiiqo ka dib goynta. Haddii kale, phytonicides waxay ka sii daadinayaan badeecadda, mana noqon doonto wax faa'iido leh.
Basasha waa argagax cudurro badan, laakiin ka hor intaadan isticmaalin, hubi inaad hubiso inaadan haysan wax khilaaf ah.
Sida loo isticmaalo sifooyinka faa'iido ee iskudhufka basasha ee kookhoolojiyada
Casiirka iyo looska oo ka soo baxa chives wuxuu si fiican uga caawiyaa jirooyinka badan ee maqaarka iyo timaha.
Tixgeli cuntooyinka ugu caansan ee dadka loo isticmaalo isticmaalka iskorowka ee kookhoolojiyada:
laga soo bilaabo duubka iyo lafaha ayaa kaa caawin doona maaskaro caleemo cusub oo la jarjarey: gariirku wuxuu ku faafaa cheesecloth oo codso 15 daqiiqo. illaa aagga ay dhibaatadu saameysey;
haddii ay timaado maqaarka qalalan ee wejiga, waa lagama maarmaan in la isku daro laba dub oo la jarjaray oo la jarjaray, 30 g oo malab ah, malab gudahood 10 maalmood gudahood waji nadiif ah 15 daqiiqo;
ka timo bacaha bacaha bacaha googo gaaban oo lagu ruxay madaxa maqaarka 10 daqiiqo, ka dibna maydhin biyo kulul iyo shaambo;
Si kor loogu qaado kobcinta timaha, muddo 3 bilood ah waxaa lagula talinayaa inay soo saaraan hal-abuurka 1 tbsp ee timaha timaha saacad ka hor inta aan la dhaqin. malqacadaha casiir basasha iyo 2 tbsp. malqacadaha vodka;
Si aad uga takhalustid dabka iyo sameynta timaha timaha, waxaa lagula talinayaa inaad ku darto casiirka basasha maro toddobaadkii hal mar isla markaana madaxa ku duub shukumaan saacad, kadibna biyo raaci biyo diirran iyo shaambo;
haddii maqaarka cagaha ay waxyeeleeyeen fungus, waxaa lagula talinayaa in aad ku darto casiir basasha cusub 10 maalmood;
Si loola dagaallamo codsiyada, waa inaad isku dartaa tiro isku mid ah casiir basbaas ah iyo malab lime ah, codso meesha ay dhibaatadu saameysey habeenkii oo ah qaab farsamo ah.
Waa muhiim! Marka la shaqeynayo timo qalalan, waxaa lagula talinayaa in lagu daro malab si casiir basal ah, taas oo ka caawisa inay jilciso. Wixii timaha saliid leh, ku dar dhawr dhibcood oo liin ah si liin basasha.
Chives ee karinta
Schnitt waxay ku dhajisaa cagaar cad, jilicsanaan iyo casiirnimo caleemo. Sidaa darteed, waa mid aad u caan ah cunto karinta. Caleenta currantka waa weyn ee salads ka sameysan khudradda cusub, vinaigrettes, iyo inflorescences qurux badan oo qurux badan ayaa qurxin doona salad kaliya, laakiin sidoo kale saxan dhinaca, hilibka, kalluunka, jiis ama xaleef saus. Rezanet waxay siin doontaa maraqa caadiga ah ama borsch caraf udgoon oo si weyn u hagaajisa dhadhanka koorsooyinka koowaad. Waxa kale oo loo isticmaali karaa inta lagu jiro diyaarinta bolse, hilib ama xabbo kalluun. Basasha ayaa ugu fiican qashinka, waxay siin doontaa piquancy, freshness iyo juiciness, waxa saxan saxan u baahan yahay.
Ma taqaanaa? Chives waxaa loo tixgeliyaa xajmiga guud, oo ku habboon dhammaan suxuunta marka laga reebo maaddooyinka. Basasha Tani waxay joojisaa dhadhanka digirta.
Ha faragalin isticmaalka lowska ku jira suugada. Kaliya ku dar suugo diyaar ah oo la kariyey. Waxay qurxin karaan wax kasta oo hilib iyo kalluun. Skoroda ma aha mid ku habboon qalajinta iyo barafka, sababtoo ah caleemo caynkan oo kale ah ayaa lumin doona dhammaan guryaha muhiimka ah. Isla mar ahaantaana, waxaa loo isticmaali karaa pickles iyo bilawga.
Chives waxay leeyihiin qaar ka hortag ah oo ay tahay in la tixgeliyo ka hor intaan la isticmaalin.
xanuunada shaqada iyo cudurrada wadnaha;
Waa in sidoo kale la xusuustaa in isticmaalka xad-dhaafka ah ee chives uu keeni karo waxyeelo iyo xanuujinta xanuunka soo socda:
calool xanuun ama mindhicirada;
In la ogaado saameynta noocaas ah ee jirku waa inuu joojiyaa isticmaalka alaabta, cabitaanka dhuxul madow marka loo eego miisaanka jirka. Haddii, ka dib markaad isticmaasho kareemka ama cadaadiska ka yimaada basasha, cuncunka maqaarka, finan, nadiifi aagga ay dhibaatadu saameysey oo ay ku jirto biyo kulul. Xaaladuna maaha inay nacnacdo si aad u degto dhulka beertaada. Dukaanka cuntada nafaqada leh iyo fiitamiinada, daaweynta, qurxinta beerta iyo cayayaanka cayayaanka - waxaad si aad ah u jeceshahay.